Faahfaahino Laga Helayo Sarkaal Muqdisho Lagu Weeraray. – Bogga Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Sarkaal Muqdisho Lagu Weeraray.
February 27, 2017 2:09 pm Views: 4
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxayo weerar qorsheysan oo ka dhacay gudaha degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho.
Weerarka qorsheysan waxaa lagu qaaday gaari uu la socday sarkaal sare oo ka tirsan dowlada Ridada federaalka’waxa uu weerarkan sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed.
Sarkaalka gaarigiisa lagu rasaaseeyay ayaa ka tirsan mas’uuliyiinta Bankiga dhexe ee dowlada federaalka’waxeyna wararka la helayo xaqiijinayaan in sarkaalka uu ka badbaaday isku dayga lagu dooniyay in lagu dilay.
Weerarkan qorsheysan waxaa lagu dilay darawalkii sarkaalka sidoo kale qaar ka mid ah ilaalada gaarka ee sarkaalka la weeraray ayaa ku dhaawacmay weerarka’sidoo kale gaariga sarkaalka waxyeelo ayaa soo gaartay.
Mas’uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo mudooyinkii dambe sii kordhisay weerarada qorsheysan ee gudaha magaalada Muqdisho kula beegsaneyso saraakiisha iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.